Madaxweynaha cusub ee Barcelona Joan Laporta oo ballanqaad ku aaddan Lionel Messi u sameeyey Taageerayaasha Kooxda – Gool FM
(Barcelona) 08 Maarso 2021. Madaxweynaha cusub ee Kooxda Barcelona, Joan Laporta ayaa ballanqaad ku aaddan Weeraryahanka Kooxda ee Lionel Messi u sameeyey Jamaahiirta naadiga reer Spain ee Barca.
Madaxweyne Joan Laporta ayaa ballanqaaday 24 saacadood kaddib doorashadiisa inuu wadahadallo cusub oo heshiis kordhin ah la geli doono Lionel Messi iyo wakiilkiisa ahna Aabbihiis Jorge.
Heshiiska uu Lionel Messi ku joogo kooxda Barcelona ayaa dhacaya xaagagan, balse Madaxweyne Laporta ayaa qarsanin inuu doonayo inuu qandaraas cusub ka saxiixo kabtanka Kooxda Barcelona.
Shabakadda Sky Sport Italia ayuu Laporta u sheegay: “Waxaan sameyn doonaa wax walba oo suurogal ah oo uu Messi ku joogi karo, waa in lagu qiimeeyo Messi Jaceylka uu u qalmo iyo dhaqaalaha ku habboon, balse kaliya lacag ma’ahan.
“Wuxuu u baahan yahay qorshe guuleysanaya oo isboorti, Leo Messi wuxuu doonayaa in Barcelona ay markale guuleysato.
“Si fiican ayaan u garanayaa isaga, xiriir shaqsi ah oo fiican ayaan la leeyahay Leo.” ayuu hadalkiisa ku daray Laporta.
Lionel Messi ayaa la la xiriirinayay kooxaha PSG iyo Manchester City inuu midkood u dhaqaaqi doono, laakiin waxaa la filayaa in Madaxweynaha cusub ee Kooxda Barcelona ay dooratay uu ka shaqeyn doono sidii uu Kabtanka xulka Argentine ugu qancin lahaa inuu sii joogo Camp.